HAYLOU LS05S, nyocha, ọnụahịa na uru | Gam akporosis
HAYLOU LS05S, nyocha, ọnụahịa na uru
Anyị na-alaghachi na nyocha na-adọrọ mmasị na Androidsis. Anyị anwalela nwa oge ọzọ smartwatch nke ahụ rutere n'ahịa ahụ ekele maka ụlọ ọrụ Haylou, ndị Haylou LS05S 2021. A nke ụlọ ọrụ Xiaomi nwekwara, nke ya na ihe ufodu di opekempe àgwà na imewe ụkpụrụ.
Anyị hụrụ elekere si na imewe siri ike, na a okirikiri okirikiri usoro mara mma nke ọma dị ka nke ọma. Ngwaọrụ na-enye uru niile anyị nwere ike ịchọ, na nhazi ugbu a na a ọnụ ọnụ n'akpa ọ bụla. Oge eruola ka ị nweta elekere anya gị?
1 HAYLOU LS05S nwere ike ịbụ smartwatch ị na-achọ
2 Mbupu HAYLOU LS05S
3 Lee anya na mmetụta nke HAYLOU LS05S
3.1 Ngosipụta na ngwanrọ na-eme ka ahụmịhe ahụ ka mma
4 Kedu ihe HAYLOU LS05S na-enye?
6 Uru na ọghọm nke Mibro Ikuku
HAYLOU LS05S nwere ike ịbụ smartwatch ị na-achọ
Enwere ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ anyị nwere ike ịchọta n'ahịa. Iji chọta a ngwaọrụ dabara anyị mkpa, ihe mbụ bụ inwe doro anya na-ebute ụzọ, na n'elu ihe nile ịmata ihe mmefu ego anyị nwere. Ọ bụrụ na pọtụfoliyo anyị abụghị maka ọtụtụ ụjọ na anyị chọrọ ka a eru smartwatch ebe a anyị nwere mmasị nhọrọ.
HAYLOU LS05S dị na ọnụọgụ ego nke anyị nwere ike ịtụle maka ọnụ. Ke adianade do, ọ na-enye a imewe na onyonyo dabara ụdị ọ bụla. Ọ bụrụ na anyị lelee atụmatụ ya, ọ nwere ike ịnye anyị ihe niile anyị nwere ike ịchọ site na smartwatch dị ugbu a. Ọ bụ ya mere taa anyị ji akwado ya, ihe EBERE LS05S ọ nwere ike ịbụ nke gị naanị ihe karịrị € 30.
Mbupu HAYLOU LS05S
Es oge ileba anya na igbe nke smartwatch a, ịgwa gị ihe niile anyị hụrụ. Dị ka ọ dị na mbụ, ihe ijuanya efu. Anyị na-achọta ozugbo nche elekere na eriri silicone agbakwunye. Otu eriri silik ojii na-arụpụta obi ụtọ na aka na nkasi obi mgbe anyị tinyere elekere na nkwekọrịta anyị.
Como ngwa anyị nwere naanị eriri USB na ha kwekọrọ ekwekọ Nchaji atụdo dabara dabara na azụ nke nche. Maka ndị ọzọ, anyị hụrụ naanị otu ndu ndu mkpụkpu na nwụnye. Ndien ke akpatre, akwụkwọ ikike metụtara akwụkwọ nke ngwaahịa a.
Lee anya na mmetụta nke HAYLOU LS05S
The HAYLOU LS05S atụmatụ a okirikiri okirikiri imewe. A priori usoro a adịghị mma ma ọ bụ dị njọ karịa otu akụkụ. Ọ bụ kama a uto nke gaje ịbụ asịwo karịa ka ọrụ si arụ ọrụ. Ekwesịrị ikwu na sọftụwia ahụ, otu obere obere obere oge gara aga, agbanweela ọtụtụ n'ụdị elekere okirikiri.
O nwere aru na ya n'ihu akụkụ etinyere n’ime igwe anaghị agba nchara agwụcha na matte ojii dị mma nke ukwuu ma dịkwa nro na aka. Ihuenyo ahụ dabara n'ụzọ zuru oke n'ime etiti ọla ahụ, ihe na - eme ka echedo ya nke ọma site na ọkpọ, ọ dịkarịa ala na nsọtụ. Ojiji nke aluminom na-eme ka elekere tụọ naanị ihe karịrị 50 gram.
El EBERE LS05S Ọ bụ na nkwalite ma nwee ike ịbụ nke gị naanị euro 30
Ngosipụta na ngwanrọ na-eme ka ahụmịhe ahụ ka mma
Su ihuenyo nwere nke 1,28 sentimita na-eji zuru oke. Na a 240 x 240 mkpebi pixels nke ahụ na-enye ahụmịhe onye ọrụ ka mma karịa atụ anya ya. Fdị font maka amamọkwa nwere ike pere mpe. Na mgbakwunye na ịgbanye ihuenyo na ntụgharị, ọ na-arụ ọrụ na mmetụ aka.
Akụrụngwa ahụ na-emegharị na ihuenyo na mmegharị ọ bụla. Chụ àjà dị iche iche mmekọrịta menus dị ka sm slide si n'elu gaa ala ma ọ bụ site n'otu njedebe ma ọ bụ nke ọzọ. Ngbanwe na nhazi ọ bụla ị chọrọ ka elekere ahụ gbanwee gị, ọ bụghị n'ụzọ ọzọ. Na mgbakwunye na enwe ike ịhọrọ okirikiri nke kachasị mma maka ụdị gị n'etiti ụdị dịgasị iche iche dị.
HAYLOU LS05S nwere bọtịnụ anụ ahụ abụọ nke dị n'akụkụ aka nri nke nche. Ha nwere ezigbo pulsation na ezigbo nlọghachi. Onye nke dị n'elu, nwere agba uhie, na-eje ozi gbanyụọ na dika igodo home. Na ọzọ bọtịnụ anyị nwere ike hazie ya nụrụ ụtọ nwere ụzọ mkpirisi, dịka ịhọrọ usoro egwuregwu.
Na akụkụ azụ ihe ihe mmetụta maka nlekota obi. Na magnet mkpọ maka ịchaji batrị. Na-ele gị leash, nke a bụ nsonaazụ nke a obosara nke anyị nwere ike ịkpọ ọkọlọtọ. Ejiri agba Matt nwa, dị ka pịa, na ihe dị nro ma sie ike. Ọ na-nwere ahụkarị taabụ iji nwee ike ịgbanwe ha n’ụzọ dị mfe.
Kedu ihe HAYLOU LS05S na-enye?
The HAYLOU LS05S atụmatụ a ezigbo njikọta ebe ọ bụ na ọ kwadebere ya na Bluetooth 5.0. Ihe na-emesi anyị obi ike a nkwụsi ike njikọ na anyị ama ijikwa amamọkwa niile n’oge a. Oge erugo ka ị ga - akwaga na ihe eji akwa akwa, nweta HAYLOU LS05S ugbu a ọnụahịa kacha mma.
La batrị, na ikike obodo nke a nwere ike inye na-enyekwa ọnụọgụ dị mma. Anyị chọtara a 300 mAh na-akwụ ụgwọ àjà a ndụ batrị ruru ụbọchị iri abụọ. N'ezie, ị ga-ezipụta na ụbọchị iri abụọ a kwekọrọ iji ojiji akpọrọ "basic". Dị ka onye nrụpụta ahụ si kwuo, na ojiji kpụ ọkụ n'ọnụ nke smartwatch batrị zuru ezu ruo ọkara, Ụbọchị 10.
Anyị nwere ike ịtụkwasị obi 100% ụgwọ batrị na naanị awa abụọ na ọkara. Nchaji nke emere site na ndọta ndọta nke ọ dabara n'ụzọ zuru oke.
Su ihuenyo, dị ka anyị kwurula, nwere 1,28 anụ ọhịa diagonal. Ihuenyo Ngosipụta TFT LCD àjà a 240 x 240 pixel mkpebi. Na ihe na-eme ka ya pụta ìhè, a ezigbo mma nwuo n'èzí na-enye gị ohere ịhụ ihuenyo gị n'ụzọ zuru oke ọbụlagodi na ìhè anyanwụ na-enwu gbaa.
HAYLOU LS05S bụ elekere Ezubere maka egwuregwu. E wezụga 12 ụdịdị maka egwuregwu dị iche iche nke iji jikwaa arụmọrụ anyị, smartwatch a nwere mmiri na uzuzu nchebe ezu ka ị ghara ichegbu onwe gị banyere ya imebi. Maka nke a, o nwere Asambodo IP68.
Nlereanya NXZ 05
Ihuenyo 1.28 sentimita
Batrị 300 mAh
Onwe ya ruo ụbọchị 20
Oge nfe Awa 2.5
Akụkụ 45 x 51.16 x 12.2
Ibu ibu 50.4 g
Ahịa 33.50 €
Linkzụta njikọ EBERE LS05S
Uru na ọghọm nke Mibro Ikuku
Su imewe ọ nwere uche yana mara mma, zuru oke maka ndị chọrọ ịnwe teknụzụ ọhụụ mana na-enweghị adọta uche.
El ego Ọ na-adọrọ mmasị n'ihi ihe ọ nwere ike inye anyị.
Su ihuenyo, nchapụta ọ na-enye na ịdị mfe nke sistemụ arụmọrụ na-agba ọsọ.
O nweghi GPS, kwere nghọta na-atụle ọnụahịa ebe ọ dị.
El leta ozi nke ozi dị obere.
Font ngosi pere mpe
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » HAYLOU LS05S, nyocha, ọnụahịa na uru
Top 6 òkè kalenda ngwa ọdịnala n'ihi gam akporo
Otu esi eziga ozi na WhatsApp na-enweghị agbakwunye nọmba na kọntaktị